Nabadgelyo-Dheer Nidaamka Kuleyliyaha Cusub ee Cusub Cusbo Cusub? Mahad waxaa ku caawin kara
Kuleylka iyo kuleyliyaha
Home > Kuleylka iyo kuleyliyaha
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kululeeyo guri, sidaas darteedQalabka Tamarta, waxaan kaa caawin karnaa inaad dooratid xalinta kuleylka iyo biyaha kulul ee gurigaaga - waa mid waxtar leh oo macno u leh hantidaada gaarka ah.
Waxaan rabnaa macaamiisheena in ay fahmaan sida gurigooda ay u diirran yihiin oo ay u qabaan qiimo ay awoodaan. Taasi waa sababta aad nooga soo wici karto talada tamarta.
U fiirso maankayaga dalabyo gaar ah.
Haddii aad cusboonaysiinayso nidaam qadiimi ah, ku rakibida mid cusub ama aad u baahan tahay adeeg, waxaan ku siin doonaa talada iyo adeegga aad u baahan tahay si aad u ilaaliso gurigaaga diiran.
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa khariidadda ugu fiican tayada qiimaha ugu fiican. Cornwall-ka, waxaan ku rakibnaa boorsooyinka gaaska cusub, kuleyliyeyaasha saliidda iyo liga kuleyliyaha guryaha macaamiisha. Boostada cusub ee Boorsada ee cusubi waxay caan ku tahay macaamiisha doonaya in ay faafiyaan kharashka kuleyliyaha cusub dhowr sano. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Maalgashiga Tamarta Maalgalineed ee loogu talagalay qaboojiyaha cusub
Qoryaha adag ee shidaalka ah waa mid aad u weyn gurigaaga. Qoryaha alwaaxda cusub ayaa ah kuwo aad waxtar u leh waxana ay kululaan karaan meelo badan oo guriga ah oo qiimo macquul ah.
Maxaa Cusboonaysiinaysa Boorsada?